Thursday, 09 February 2017 20:09
Duula dhibee tiraakoomaarratti taasifamaa jiruun bu'aan argamaa jira
Injifannoowwan waggoota muraasa darbanitti damee fayyaa irratti argamaniin Itoophiyaan imaammata fayyaa sirrii baafattee hojjachaa jiraachuu kan ragaa bahan hedduudha.
Hojiiwwan karoora barkumee damee fayyaa milkeessuuf hojjatamaniin milkaa'inni jiru olaanaa ta'us ammas fayyaa hawaasaa qoraa kan jiran dhibeewwan hedduun jiraachuusaanii garuu waan mamamuu miti.
Dhibeewwan dagatamoo ykn xiyyeeffannoo guddaa hinarganneefi rakkoo fayyaa hawaasaa guddaa ta'an keessaa inni tokko dhibee Tiraakoomaa yemmuu ta'u, namoota hedduu qaroo ijaa dhabsiisuudhaanis dorgomaa hinqabu.
Dhibee kanaan akka biyyaattis ta'ee addunyaatti sadarkaa duraarra kan jiru immoo naannoo Amaaraa yemmuu ta'u, rakkoo kana furuufis hojiiwwan hedduu hojjatamaa turamuusaatu himama.
Sochii cimaa tamsa'ina dhibichaa ittisuuf taasifamaa tureen waggoota sadan darbanitti faca'iinsa dhibichaa dhibbantaa 72 irra ture gara 29tti gadi buusuun kan danda'ame ta'uu dhaabbanni 'Lions Club International' ibseera.
Dhaabbatichi sagantaa beekamtii miseensota tola ooltotaa Roobii darbe Finfinnetti adeemsiseen, sochii dhibichaa to'achuuf taasifamurratti qooda guddaa taphataniiru jechuun pirezdaantii Naannoo Amaaraa, Obbo Gadduu Andargaachoof beekamtii kabajaa kenneera.
Miseensa boordii dhaabbatichaa kan ta'an looreetiin addunyaa, Dr Xibabaa Yemaana Birhaan akka jedhanitti, haalli naannoon Amaaraa tiraakoomaan walqabatee keessa ture akkuma addunyaattuu baay'ee qaaneessaa akka ture eeranii, dhibee kana to'achuuf immoo qaamotni garaa garaa tumsa olaanaa taasisaa turuusaanii dubbataniiru.
Naannichatti kan argaman aanota 17 keessatti dhibee kana guutummaatti to'achuun kan danda'ame ta'uus dubbataniiru.
Keessattuu manneen barnootaa keessatti sochiin hubannoo uumuu bal'inaan akka kennamu akkasumas qulqullinni naannawaafi dhuunfaa akka xiyyeeffannoo argatu gochuudhaan hojii hojjatameen bu'aan jedhame argamuusaa kan himan Dr. Xibabaan, hojiileen kunniin hundi haala kaa'ameen tumsaa kan turan Obbo Gadduu Andargachootiif beekamtiin tola ooltummaa kennamuu ibsaniiru.
Biyyi tokko dhibee kana too'atte kan jedhamu tamsa'ina dhibee kanaa dhibbantaa 5 gadi yemmuu taasifte ta'uu ulaagaan dhaabbata Fayyaa Addunyaa ni agarsiisa.
Thursday, 09 February 2017 19:40
Maraatooniin Moohaa xumurame
Walta'iinsa Federeeshina Atileetiksii Bulchinsa Magaalaa Finfinneefi Industirii Lallaafaa Mohaatiin Waggaa waggaadhaan magaalaa Finfinneetti kan qopheeffamu dorgommiin maaraatoonii Mohaa Dilbata darbe haala miidhagaadhaan gaggeeffameera.
Ka'umsiifi deebiin isaa naannaawaa Sammiit ta'uun si'a 21faf kilaboota atileetiksi magaalaa Finfinneefi atileetota dhuunfaa jidduutti kan adeemsifame yoo ta'u, barana dorgommicharratti atileetoonni 233 ta'an koorniyaa lameeniinuu hirmaataniiru.
Hirmaatoota kanneen keessaa atileetonni dhiiraa 99fi dubartootaa ammoo 33 yemmuu ta'an, isaan kunneenis kilaboota Finfinnee irraa16, dhuunfaa dhiiraan atileetonni 72fi dubartonni saddeet walumaagalatti atileetonni 80fi atileetonni durii 21 hirmaachuu danda'aniiru.
Dorgommii adeemsifameettis dhiiraan atileeti Taadassaa Asaffaa kilaba Bulchiinsa Poolisii Manneen Sirreessaa Federaalaarraa, Balaachew Alamuu Poolisii Federaalaarraa, Amaanu'eel Tashoomaa dhuunfaadhaan 1fa hanga 3fa ba'aniiru.
Kan dubartoota jidduutti adeemsifameen ammoo Amalawarq Fiqaaduu Poolisii Federaalaarraa, Tasfaanesh Magarsaafi Tsiyoon Abbaabbuu dhuunfaadhaan walduraa duubaan 1fa hanga 3fa ba'uudhaan mo'ataniiru.
Dorgommii baranaa kanatti atileetonni tokkoffaadhaa hanga sadaffaa ba'an qarshii, akkasumas meedaaliyaa warqii, meetiifi nahaasa keessummoota affeeramaniin badhaafamaniiru.
Torban kana/This_Week 28793
Guyyaa mara/All_Days 1313304